भारतीय ज्यादतिविरुद्ध अनलाइन प्रदर्शन/Global Day of Action Against Indian Aggression in Nepal – नेपाल डायरी डट कम
जुन 15, 2009 जुन 22, 2009 by nepaldiary
भारतीय हस्तक्षेप बिरुद्ध को अनलाइन प्रदर्शन को अन्तिम फोटो ।
हामीलाई नेपालडायरी हेरेर कमेन्ट पठाउने र ब्यानर पठाउने सबै लाई धन्यवाद ।
by Rajesh KC/Nagarik news
बिदेशी प्रभु लाई चिट्ठी
[गत जुन छ तारिखमा पोस्ट गरिएको “बिदेशी प्रभु लाई चिठ्ठी” को सान्दर्भिकता आज पुन भएको ले दोहोर्‍याएर राखिएको छ । ]
आदरणिय सुद साहेब
साहेब म बहादुर कान्छा , तपाईंको/ तपाईंहरुको विश्वाशप्राप्त चौकिदार । घर दाङ कोइलाबास गा बि स वडा न ४ तेतर बस्ती ।
साहेब,हजुर को गाथमा आरामै होला । मलाई भने अली सन्चो छैन । कोइलाबास बाट हिंडेर दाङ,सतबरिया आइपुगेको छु । हिजो दिन भरको थकान छ , राती खुल्ला आकाशको दाङ को सतबरिया- २ वनघुस्रीस्थित कर्री सामुदायिक वनक्षेत्रको चौर मा रात काटियो । चिसो लागेको छ, अली अली रुघा खोकी पनि लागेको छ ।
सुद साहेब, तपाईं का सिमा रक्षक त सिमा भक्षक पो भएर निस्के । दिन रात हामीलाई काटुला, मारुला झै गर्छन्। हैन, हजुरले तिन्लाई सिमा रक्षकमा राखेको कि सिमा भक्षकमा सर ?
हिजो तपाईंलाई टि वि मा देखेको थिए ,सुजाता मैसाप सँग , हामीले सिमा मा केही गरेको छैन, नेपाली मिडियाले पो जे पायो त्यै लेखे भनेर कुर्लदै गरेको पनि देखे । तपाईं त सार्है चोट्टा पो हुनुहुदोरहेछ त साहेब । कती झुट बोल्न जाने को तपाईंले ? म आफु तपाईंका सैनिक को कुटाइ खप्न नसकेर हिंडेको । अनी म मेरो देस का पत्र पत्रीका , अखबार लाई विश्वाश नगरेर तपाईं को ‘सेफद झुट’मा विश्वास गर्छु लस्तो तपाईं लाई लाग्छ ? तपाईं लाई के प्रमाण चाहियो साहेब ? म सँग छ प्रमाण । हेर्ने हो भने आउनुहोस कोइलाबास , यतै भेटौँला । तपाईंको त नि सुद साहेब अनुहार मात्र कालो होइन , मन पनि कालो रहेछ ।
सुद साहेब, हामी गरीब छौ, निर्धा छौ , तपाईं का गोली गठ्ठा धारी सैनिक सँग लड्न सक्दैनौ भनेर तपाईंले हामीलाई हेपेको होलानी हैन ? तपाईंहरु त सार्‍है जाली , मापाको पो हुनुहुदोरहेछ नि । गरीब, निर्धा भने पछी जे गरे पनि हुन्छ, थिचोमिचो गरे पनि हुन्छ, हाम्रा चेली बेटी को इज्जत लुटे पनि हुन्छ, बेपत्ता बनाए पनि हुन्छ भन्ने पो तपाईं को निती रहेछ त । तपाईंहरुको निती नियम संक्रिति नै हेपाहा, मिचाहा हो ? चेलीबेटिको इज्जत गर्न, अरुलाई पनि राम्रो व्यबहार गर्न नजान्ने सस्कार मा पो हुर्कनुभएको रहेछ नि यहाँ हरु ?
सुद साहेब, हुनत तपाईंको देसमा लाखौ नेपाली ज्याला, मजुरी गर्छन्, चौकिदार र दरबान छन । म पनि त भर्खर फर्केको तपाईंको देश बाट , तपाईंहरुको बचन कती भोगियो, देखियो तर पनि यती तल गिरेर बोल्नु, व्यबहार गर्नु होला एउटा छिमिकी सँग भन्ने त सोचेको थीन मैले । गरीबलाई लाई त हेप्ने, खेदने,मार्ने गर्नु हुँदैन त साहेब । म जस्तो बुढो चौकिदार ले तपाईं जस्ता लाई सिकाउनु पर्ने यती कुरा पनि ।
हेर्नुहोस साहेब , हामी गरीब छौ, तर स्वाभिमानी छौ। ‘न भुतो र भबिष्यती’तपाइहरुजस्तो अंग्रेजको गुलाम भएर नबाँचेको र नबाच्ने हुनाले अरुलाई हेप्न, उठिबास गर्न र माइक अगाडि झुट बोल्न हामी लाई आउँदैन । तर आउँदैन भन्दैमा आत्मा र आमा लाई बेचेर तपाईंको गुलामी गर्न पनि आउदैन । तपाईं हरुले पो यस्तो सस्कार अंग्रेजको गुलाम गरेर सुक्नु भो होला । हामी ले सिकेनौ साहेब ।
तपाईंलाई यो मेरो धम्की होइन, साहेब सुझाब हो , चेतावनी सम्म हो ।
३ करोड छौ हामी सुद साहेब । परि आउँदा हामीले पनि कोदालो पगालेर खुकुरी बनाउन जानेका छौ । हामी किसान हौ, श्रमिक हौ , चौकिदार हौ, युद्ध मोर्चाका सिपाइ होइनौ तर देश ले मागे नि सुद साहेब ज्वालामुखी ओकल्न, सुनामी ल्याउन तयार छौ । बरु मर्न तयार छौ साहेब तर तपाईं को गुलामी गर्ने कदापी तयार छैनौ । तपाईंको घरमा चौकिदार गर्ने बहादुरलाई छोटो, निर्धो नसम्झिबक्सेला । कोइबेला तपाईंको अत्याचार बाट आजित भएका चौकिदार को हातको लाठो उठ्यो भने नि साहेब, तपाईं मात्र होइन, तपाईंका बाउ, बराजु को टाउको फुटाउन समेत सामर्थ्य राख्छ भन्ने त तपाईंलाई पनि ज्ञातै होला ।
भक्षक बनेका तपाईंका सिमा रक्षका हरुलाई पनि सुनाइदिनुहोला । बाघ को बच्चा जहिल्यै पनि डम्मरु नै हुन्छ, बछेडो हुन सक्दैन । हामी ३ करोड त्यै बाघका डम्मरु हौ, जस्का पिता पुर्खाले युद्धभुमिमा लड्दा लद्डै बरु ज्यान दिए। तपाईंको देशमा जस्तो अंग्रेजको उपनिबेश लाई टिक्न खान दिएनन ।
शायद तपाईं हरुले पो अर्काको शासन सहेर, अंग्रेजको जुठो पुरो खाएर बाचेको ले होला, त्यै बिस्तारबादी, छिमेकी हेप्ने सस्कार जान्नु भएको छ । हामीले त न त अरुलाई हेप्न जानेका छौ न त हाम्रो चन्द्र सुर्य लाई कहिल्यै झुक्न दियौ न कहिल्यै दिनेछौ ।
। यो देश त हाम्रो हो नि, हामी नेपाली को साहेब। तपाईंका बाउ बराजुको बिर्ता त होइन नि । तपाईंकै बिर्तामा गएर मनलाग्दी गर्नुहोस् है साहेब । हाम्रो देशमा होइन । तपाईंलाई फोकल्याण, बर्मा को लडाईं त थाहै होला । हामीले लडेको लडाईं हो त्यो साहेब । गोर्खाली ले नि सुद साहेब , उखानै छ ‘गर्भमै सिक्छ रे खुकुरी चलाउन’ । के तपाईं हरुलाई देखाउनै पर्ने हो ?
अर्को कुरा नि सुद साहेब , हामी भुटाङे होइनौ नि , नेपाली हौ नेपाली , । वीर बलभद्र का सन्तान । तपाईंहरुलाई जित्ने अंग्रेज त हारेर भागेका थीए एक ताका । तपाईं हरु चै ‘कुन खेत को मुली’ हो र ?
पत्र अली कडा भए जस्तो छ । एउटा साधारण, गरीब , चौकिदार नेपाली ले लेखेको पत्र तपाईंका बफादार गिरिजा, माकुन वा प्रचन्ड ले लेखेजस्तो नरम, भाषा मिलाएर, स्वस्ति गाएजस्तो कसरी होस् त ? मिलाएर पढ्नु होला, बुझ्नु होला । अहिले लाई यती मात्रै । समय।परिस्थिती ले तपाइ र तपाईं हरुको सतबुध्धी आएछ भने ठिकै छ नत्र अर्को पटक , नालापानी ,कालापानि वा कोइलाबास को लडाईंमा भेटौँला
वीर बहादुर नेपाली
हाल : दाङ, सतबरिया
Posted in नागरीक,नेपाल डायरी,Global Day of Action Against Indian Aggression in NepalTagged अनलाइन प्रदर्शन,गोर्खाली,नेपाली,सुद्लाई पत्र,Global Day of Action Against Indian Aggression in Nepal
अघिल्लो सीमा अतिक्रमणको बिरोधमा अनलाइन प्रदर्शन
अर्को नेपालको सिमा मिचिएको छैन -मेनन
7 thoughts on “भारतीय ज्यादतिविरुद्ध अनलाइन प्रदर्शन/Global Day of Action Against Indian Aggression in Nepal”
जुन 14, 2009 मा 3:10 बेलुका
plz post articls for june 15 global action against indian !
narendra raj भन्नुहुन्छ:
जुन 14, 2009 मा 3:12 बेलुका
this is one of the very nice articl i have read in blog.
gorkhali ko santan laai tarsaauna nakhoja
जुन 14, 2009 मा 3:13 बेलुका
यो देश त हाम्रो हो नि, हामी नेपाली को साहेब। तपाईंका बाउ बराजुको बिर्ता त होइन नि । तपाईंकै बिर्तामा गएर मनलाग्दी गर्नुहोस् है साहेब । हाम्रो देशमा होइन । तपाईंलाई फोकल्याण, बर्मा को लडाईं त थाहै होला । हामीले लडेको लडाईं हो त्यो साहेब । गोर्खाली ले नि सुद साहेब , उखानै छ ‘गर्भमै सिक्छ रे खुकुरी चलाउन’ । के तपाईं हरुलाई देखाउनै पर्ने हो ? – i am agree !!
जुन 14, 2009 मा 3:14 बेलुका
la चेतावनी kha sud !
govinda pariyar भन्नुहुन्छ:
जुन 14, 2009 मा 3:16 बेलुका
haami na ta kasiko gulam chaer baachu na bhabisya bachnechau
Narayan sharma Magragadi5Bardiya भन्नुहुन्छ:
जुन 15, 2009 मा 9:08 बिहान
Very impresing image & artical thanks for you
जुन 15, 2009 मा 9:10 बिहान
Very impresing image & artical thanks for artical&image